कथा : हात्तीको डोरी - Safal Stories
Home Short Stories कथा : हात्तीको डोरी
कथा : हात्तीको डोरी
एकपटक एकजना व्यक्ति हात्तीहरुलाई पालेर राखिएको ठाउँ हेर्न पुग्यो । त्यहाँ पुग्दा उनी अचम्भित भए, हात्तीहरु बाहिर नै थिए, उनीहरुको घाँटीमा कुनै बेल्ट वा दाम्लो थिएन ।
ती व्यक्तिले हात्तीको हेरचाह गर्ने माउतेलाई सोधे, ‘ यसरि यी हात्तीहरु भाग्दैनन् ? ” माउतेले उत्तर दिए ,’ अहँ, भाग्दैनन् । हेर्नुस् न , उनीहरुको खुट्टामा डोरी बाँधिएको छ । ‘ त्यो डोरी देखेर ती व्यक्ति झनै अचम्भित बने । किनकी ती ठूला हात्तीहरुको खुट्टामा बाँधिएको डोरी निकै मसिनो थियो । फेरी सोधे , ‘ यो डोरी उनीहरुले चुँडाउन सक्दैनन् र ? ‘
अचम्भित बनेका ती व्यक्तिलाई हेरेर मुस्कुराइरहेको माउतेले जवाफ दियो , ‘ हात्तीहरु जब साना हुन्छन् , हामीले यस्तै डोरीले बाँधेका हुन्छौं । साना हात्तीहरुले त्यो डोरी चुडाउन सक्दैनन् । त्यसपछि अलिकति ठूला हुँदा फेरी उनीहरुको शरीरको आकार अनुसारकै डोरी बांध्छौँ । तर विस्तारै उनीहरु यो रुपमा आउँदा सम्म उनीहरुको खुट्टाको यो सानो डोरी फेर्नु पर्दैन । किनकी उनीहरुलाई डोरीको बानी परिसकेको हुन्छ र डोरी चुडाउन सकिंदैन भन्ने भ्रम परेको हुन्छ ‘।
कतै तपाईं पनि अनेक बाहनामा तपाईंको खुट्टामा बाँधिएको डोरी चुडाउन सकिंदैन भन्ने भ्रममा त हुनुहुन्न ?
Previousसामान्य भेटघाट वा कामको मिटिंग कसरी गर्ने र कति समय खर्चिने ?
Nextतनावबाट बाहिर निस्कन सहयोग गर्ने भनाइहरु